ထန်နေတုန်းပဲလား ကလေးမ | CeleTrend
ဝဏ္ဏ ဘဝ၏ ဒီအချိန်မှာ ဓာတ်အပျက်ဆုံးကာလနှင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ စုစုအောင် သည် သူ နောက်ဆုံးနှစ် တက်နေသည့် ကျောင်းမှာ ဆရာမဖြစ်လာသည်။ ဒေါက်ဖိနပ်ပေါ်မှ သူမကို စမြင်ကတည်းက သူ့စိတ်ကလှုပ်ရှားသည်။ ၁၈ နှစ်သား သူ့ထက် သူမက နည်းနည်း အသက်ကြီးသည်။ သို့သော် အခြေအနေအရ သူ့အား ဆုံးမနိုင်သည့်အ ခွင့် အရေး ရှိနေသည်။ သူ့ အားကစားနှင့် အခြား ကျောင်းတွင်း လုပ်ငန်းတွေကို သူမက အသိအမှတ်မပြုတော့ အရေးထားရမည့်ကျောင်းသားစာရင်းမှာလည်း သူမပါတော့။ သူ့ဘဝမှာ အခက်အခဲတွေတွေ့အောင် သူမလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး သူကျောင်းက ထွက်လိုက်ရသည် အထိ။ ထောင်မကျ အောင် သူ့မှာ တပ်ထဲဝင်လိုက်ရသည်။ ဒါကြောင့်ပင် သူမသည် သူ၏ မနှစ်သက်ဆုံး တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်လည်း ခုချိန်က သူ့အတွက် အသာယာဆုံးဖြစ်လာသည်။ သူမကို နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရသည်က ရပ်ကွက်ရုံးမှာ။ သူကျူးလွန်ခဲ့တာတွေအတွက် သူမက ရပ်ပြီး တိုင်ကြားနေသည်။ ပြန်တွေးတိုင်း ဒီကိစ္စအတွက် သူ့ဒေါသက တောက်လောင်ဆဲ။ ဘဝမှာ သူလုပ်ခဲ့တာအများကြီးထဲမှာ မိန်းကလေးတွေကို မတရားကျင့်တာ မရှိခဲ့။ ခု အခြေအနေကတော့ သူ မရည်ရွယ်သော်လည်း ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
သူအမှန်တကယ် ကျူးလွန်ခဲ့သောအမှုဖြစ်၍ လက်ခံခဲ့ရသည်။ ထောင်ကျရမည့်ကိန်း။ သို့သော် မုဒိန်းကျင့်ရန်ကျိုးစားမှုဖြင့် အချုပ်ထဲမဝင် ရအောင် တပ်ထဲဝင်ခဲ့ရခြင်း သည် လုံးဝမကျေနပ်ဖွယ်။ သူက သူမကို နံရံမှာ ဖိကပ်၍ အဖုတ်ကိုနှိုက်ခဲ့ပုံ ကို မျက်ရည်လည်ရွှဲနှင့် တိုင် နေသော သူမအား ဖြစ်နိုင်လျှင် တစ်ခါတည်း လည်ပင်းညှစ်သတ်ပစ်လိုက်ချင်ခဲ့သည်။ စတွေ့သည်မှစ၍ သူ့ကို အမြင်မကြည်၊ သူ့ဖက်ကတော့ သူမအကြောင်းတွေးမိတိုင်း ရမ္မက်စိတ်က ကြွလျှက်။ သူ့အပေါ် ခပ်ထန်ထန် ပြောသော စကားသံသည် တခြားသူသာဆိုလျှင် ချီးထွက်အောင်ကန်ကြောက်ပစ်မိမည်ဖြစ်သည်။ သူကြိုက်နေမှန်းလည်း သူမသိသည်။ တခြားလူတွေလည်းသိသည်။ သူ့အပေါ် စိတ်ညွှတ်အောင်လည်းအမျိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဖခင်မရှိသည့် တိုင်းရင်းသွေး ပါသူ ဝဏ္ဏ အတွက် ဒီလိုမြို့လေးမှာ မိန်းမယူနိုင်မည့် အသက်မွေးကြောင်းအလုပ်တစ်ခုရဖို့ကမလွယ်။ သို့သော်သူကြိုးစားခဲ့သည်။ အခြား ရွေးချယ်စရာမိန်းကလေးများရှိခဲ့သော်လည်း သူက တစိုက်မတ်မတ်။ တစ်နေ့တာ့ သူ ကျောင်းဝန်းအတွင်း ဆေးခြောက်ရောင်းနေသည်ကို သူမ မိ သွားသည်။
တခြားလူဆိုလျှင် သတိပေးခံရမည်သာဖြစ်သည်။ ဒီအလုပ်ကို သူအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ဘူးပြီ။ ကျောင်းဆင်းချိန် အတန်းထဲမှာ သူမ ထိုင်ထိုင် နေတတ်သည်ကို နေ့တိုင်း သူသတိထားမိသည်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီအတွက် သူ့ကို အပြစ်ပေးခံရမည်ဟု ထင်မထားခဲ့ပေ။ “ဒါ မင်းကို နောက်ဆုံးအကြိမ် သတိပေးခြင်းပဲ ဝဏ္ဏ,” ဆရာမက လေသံမာမာဖြင့် ဆိုသည်။ “မင်းဟာ ကလေးလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ အမှားအမှန်ကို သိသင့်နေပြီ။ ကျောင်းဝန်းထဲမှာ နောက်တစ်ခါ ခုလို ဥပဒေနဲ့မကင်းတာတွေလုပ်ရင် ကျောင်းက အပြီးထုတ်ခံရမယ်။ ငါပြောတာ ရှင်းတယ်နော်” ဆရာမကို မခိုးမခန့် အကြည့်ဖြင့် ဝဏ္ဏ ပြုံးသည်။ “ဟုတ်ကဲ့ပါ” သူလက်ခံလိုက်သည်။ “ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အံ့သြမိတယ်။ ဆရာမ ဒါလောက် တင်းမာနေတာ နောက်ခံကောင်းကောင်းပဲရှိနေလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆိုတဲ့သဘောလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် ကလည်း ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သိပါတယ်နော” စုစုအောင် ထိတ်လန့်ပုံမရ။ “ဒီအချိန်ဟာ ငါ့ကို စော်ကားမော်ကား ပြန်ခွတ် ရမယ့် အချိန်မဟုတ်ဘူး ဝဏ္ဏ” “ငါ့မှာ အလုပ်တွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ မင်းနဲ့ ရန်ဖြစ်နေဖို့အချိန်မရှိဘူး” “အော. ကျွန်တော်နဲ့ ဟုတ်လား” ဝဏ္ဏ ပြန်အော်သည်။ ရိသဲ့သဲ့ လုပ်ချင်စိတ်ပျောက်သွားသည်။ သူနဲ့ ဘယ်တော့မှ ပြေပြေလည်လည် မဖြစ် နိုင်မှန်း လည်း သတိထားမိသွားသည်။ သူထရပ်လိုက်ပြီး အခန်းရှေ့ဖက် လျှောက်သွားသည်။
“ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောဖို့ မတူဘူး မတန်ဘူး ပေါ့ဟုတ်လား” “မင်းထင်ချင်သလိုထင်လေ” သူမပြန်ပြေပြောသည်။ “မင်းကြိုက်တဲ့နေရာမှ သွားအော်။ သွား” ဝဏ္ဏက ဒါလောက်နဲ့မရ။ သူမဖက်သို့ လှည့်၍ ရင်ဆိုင်လိုက်သည်။ မျက်လုံးက နီရဲနေသည်။ စုအောင် ခပ်သွက်သွက် နောက်ဆုတ်လိုက်သည်။ အခန်းနံရံနှင့် ကျော ကပ် မိသော အခါ သူမ ရှောင်၍မရတော့။ ဝဏ္ဏ ရှေ့တိုးလာသည်။ သူမနှင့် ရင်ခြင်းနှင့် ထိမိသည်အထိ အတင်းကပ်သည်။ သူမပါးကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်။ သူ့ပါးစပ်က သူမကို ထိတော့မတတ်။ ဒေါသကြောင့် အသက်ရှူသံပြင်းထန်လျှက် အတော်ကြာကြာ ဒီပုံစံအတိုင်း ရပ်နေသည်။ သူမက မလှုပ်၊ အော်လည်းမအော် သလို တွန်းဖယ်ပစ်ခြင်းလည်းမပြုပေ။ ရိုးရိုးပင် ရပ်နေသည်။ သူ ဘာလုပ်လုပ် ခံမည်ဆိုသည့် ပုံနှင့် ရပ်နေသည်။ သူမ အသက်ရှူသံက မမှန်။ ကိုယ်လုံးက အနည်းငယ် တုန်ခါနေသည်။ သို့သော် သူ့ကို ဘာမှပြန်မလုပ်။ သူမကို ကောင်းစွာ ဆန့်ကျင်ပြပြီးပြီမို့ ပြန်လှည့်ထွက်ခဲ့ဖို့တော့ စဉ်းစားပါသေးသည်။ သို့သော်ဤမျှ လုပ်တာနှင့်ပင် သူ ကျောင်းထုတ်ခံရဖို့က လုံလောက် နေလေပြီ။ ဝဏ္ဏ ခြေလှမ်းတစ်ဝက်ထပ်တိုးလိုက်သည်။ “ဆောရီးပဲ” သူ တိုးတိုးပြောသည်။ ထို့နောက် သူ့လက်များက စုအောင်၏ ပါးပေါ်မှ လျှော ချ သွားသည်။
“ဆောရီးပဲနော်” သူ အခန်းထဲက ထွက်ခဲ့သည်။ နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်။ ဒီလောက်နှင့် သူတော့ အထုတ်ခံရပြီဟု တွေးသည်။ သို့သော် သူမက စကားတစ်ခွန်းမှ မဟခဲ့။ ဒါကြောင့်ပင် သူ တအံ့တသြ ဖြစ်ကာ သူလုပ်ခဲ့တာကို သူမကျေနပ်နေခဲ့လေသလားဟု စဉ်းစား ခြင်းဖြစ်သည်။ ရုံးရှေ့မှာ ထွက်ဆိုသံကြားတော့မှ ဒီလို စဉ်းစားခဲ့တာကို အရှက်ရမိတော့သည်။ နမ်းမိတော့မတတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက် ရက်သတ္တပတ် အတော် ကြာမှာ သူမ ခိုင်းထားသော ကျောင်းစာ အလုပ် မပြီးသေးတာကို ဆူပူဖို့ သူ တို့ စာသင်ခန်းထဲရောက်လာခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါ သူက ထွက်ပြေး ရမည့်အလှည့်။ စာက မပြီးနိုင်။ သူ ဒီလိုနဲ့ပဲ လစ်ပြေးခဲ့တာ ကျောင်းက ဘွဲ့ပင်ရတော့မည်။ စာပြီးအောင်လုပ်ပြီး တင်ပေးဖို့ သူ့ကို တောင်းဆိုလာသောအခါ သူစိတ်ညစ်သည်။ အရှိန်သေသွားသော စိတ်က ပြန်ထလာသည်။ ဝဏ္ဏ အသာထပြေးပြီး ကျောင်းနောက်ဖက် လူရှင်းသည့် အခန်းဖက် ထွက်လာခဲ့သည်။ ဒါဆို သူမလိုက်လာမည်မဟုတ်။
သို့သော်။ သူမက လိုက်လာသည်။ ဘာဖြစ်ချင်လို့လိုက်လာတာလဲ တွေးမိရသည်။ လူမရှိသော အခန်းထဲ သူမ ဝင်လာတော့ ဝဏ္ဏ က အခန်းတံခါးကို ဆွဲပိတ်လိုက်သည်။ လက်မောင်းများကိုဆွဲယူပြီး ဘယ်ဖက်လက်ဖြင့် ဆွဲ ချုပ် ထားကာ ညာဖက်လက်က သူမ မေးစေ့ကို ကိုင်သည်။ ပါးစပ်ကို မလှုပ်နိုင်အောင် လုပ်ထားသည်။ ဒီတစ်ခါ သူ တွေဝေမနေတော့။ ပါးစပ်ဖြင့် ကပ်ကာ အတင်းနမ်းသည်။ သူမ နှုတ်ခမ်းများသည် မလိုင်လိုချိုသည်။ သူ့ စိတ်က ပိုထန်လာစေသည်။ မေးစေ့ကိုကိုင်ထား သော လက်များကို လျှောချကာ သူမရင်သားများကို ဆုတ်ကိုင်သည်။ လျှာချင်း ကလိနေရင်း သူမ အသာညည်းသည်ကို ခံစားမိသည်။ နို့သီးခေါင်းများကို သူအသာချေ သည်။ သူမ အနည်းငယ် တွန့်သွားသည်။ သူလွှတ်ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း သိသာသွားသည်။ သူ့လက်က သူမအင်္ကျီ ထဲဝင်သွားကာ နို့ကို ဆုတ်ကိုင်သည်။ သူမ ခေါင်းကို ဝဏ္ဏ နှင့် ဝေးရာသို့လှည့်ရင်း မျက်နှာက နီရဲလာသည်။ အရသာတွေ့နေပုံ က သိသာသည်။ “ငါ မင်းကို လုပ်ချင်တယ်ကွာ” ဝဏ္ဏ တိုးတိုးနှင့် ချိုသာစွာပြောသည်။ လက်တစ်ဖက်က တင်ပါးဆုံ မှသည် ပေါင်ကြားများအထိ လျှောဆင်း သွားသည်။ ဆရာမကို ဆက်နမ်းနေရင်း လက်တစ်ဖက်က လုံချည်အောက်မှ အတွင်းခံထဲထိရောက်သွားသည်။ သူမညည်းရင်း အသာရုန်း
သူ့လက်ချောင်းက သူမ ပစ္စည်းထဲကိုအသာလေးတိုးဝင်ကာ လှည့်ပတ်နေရင်း လက်မက အစေ့ကို ပွတ်ပေးနေသည်။ သူမ တအင်း အင်း နှင့် ကော့ပေးလာနေသည်။ စုအောင် လျှာကို ဝဏ္ဏ ဆီမှ ဆွဲဖယ်လိုက်ပြီး အသက်ရှူမှန်အောင်ကြိုးစားသည်။ သူက သူမ လည်တိုင်ကို စုတ်သည်။ ကောင်းလိုက်တာ။ “ငါ သွားတော့မယ်” သူမ တိုးတိုးပြောသည်။ သူက လည်တိုင်ကို ဖမ်းဆွဲထားသည်။ “လွတ်ပါ။ ဝဏ္ဏ” ဝဏ္ဏ ကိုယ်ကို ဆန့်လိုက်ပြီး လက်ကို စုအောင်၏ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအတွင်းမှ အသာထုတ်လိုက်သည်။ လက်နှစ်ဖက်နှင့် သူမ မျက်နှာကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး မျက်နှာချင်းကပ်ကြည့်သည်။ “ငါ့ကို မကြိုက်ဘူးလား။ ပြောလေ” သူမ ခါးကို ပြန်ဆုတ်ရင်း ပြောသည်။ “မင်းဟာ ကျောင်းသားပဲ ဝဏ္ဏ” သူမ တီးတိုးရေရွတ်သည်။ “ပြီးတော့ ငါ က မင်းဆရာမလေ။ ငါ အလုပ်ပြုတ်သွားမှာပေါ့။ ကဲ ငါသွားပါရစေ။ ဖယ်တော့” သူ လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ စာသင်ခန်းထဲပြန်လာခဲ့သည်။ သူမ ဘာလို့ ဒီလို ပြန်ပြောသည်ကို သူနားမလည်။ သူစိတ်ပြေအောင် လွတ်လမ်း ရှာရင်းပြောတာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့မလွယ်။ မုဒိန်းကျင့်ရန်ကြံစည်မှု။ ကာယိနြေ္ဒဖျက်မှု ဘယ်ဟာနဲ့ပဲ သူ့ကို တိုင်တိုင် သူ့ ဘဝကမလွယ်ခဲ့ပေ။ ခုတော့ ၁ဝနှစ်အကြာမှာပါ။ ဝဏ္ဏ စောင့်ကြည့်နေသည်။ သူ့ လူ ၂ ဦး ခြံရံပြီး သူ့စားပွဲရှေ့မှာ သူမ ဝင်ထိုင်နေသည်။ သူမ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေသည်။
သူသည် နှိပ်စက် ညှင်းပန်းခြင်းများကို စိတ်မပါခဲ့။ သို့သော် ဒီတစ်ခါတော့ အခြေအနေက တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သူမကို မတွေ့တော့သည်မှာ ဆယ်နှစ်ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း ပြောင်းလဲသွားသည်ဟု မထင်။ ဆံပင်က ခပ်ညိုညို။ သွယ်လျ ပြော့ပြောင်း သည်။ သူ့စိတ်ကူးထဲမှာ ရှိနေခဲ့သော ဆံပင်ထက် နည်းနည်းတိုသွားသည်ဟုထင်ရသည်။ ခန့်ညားသွယ်လျသော ကိုယ်ခန္ဓာက မပြောင်း။ တစ်ပေါင် မျှပင် ပိုလာမည်မထင်။ သို့သော် လှပသော မျက်ဝန်းညိုများတွင် ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းများပြည့်နေသည်။ ဒါကို သူက သဘောကျနေသည်။ စုအောင် သည် အရင်ပုံစံမပြောင်းသော်လည်း ဝဏ္ဏ ကတော့ သိသိသာသာပင် အရင်လို မဟုတ်တော့ပေ။ သူသည် သူမ ကျောင်းတုန်းက သိခဲ့သလို လမ်းသရဲဂိုဏ်း တွေနဲ့လည်း မပတ်သက်တော့။ သူကြီးပြင်းလာပြီ။ ကိုယ်ခန္ဓာကပင် သူ့ရှေ့မှာ ဝင်ထိုင်သူတို့ ခန့်ညားရ လောက် အောင် ပြောင်းသွားသည်။ တိုင်းရင်းသား လူမိုက်ပုံ မှသည် ရင့်ကျက်လာပြီ။ ဆံပင်က သပ်သပ်ယပ်ယပ် ညှပ်ထားသည်။ မျက်လုံး များက တော့ တောက်ပနေဆဲပင်။ ခုတော့ သူသည် သူမဘဝကို ချေမွ ပစ်နိုင်နေပြီ။ ဆယ်နှစ်အတွင်း သူသည် ခိုင်မာသော မှောင်ခိုအုပ်စုကြီးတစ်ခုကို ထူထောင်ထားနိုင်ခဲ့ သည်။ လူမိုက်တွေ မွေးထားသော သူတို့အုပ်စုသည် မာဖီးယား ဂိုဏ်းပမာ ဒီဒေသ ကို ခိုင်ခန့်စွာ ချုပ်ကိုင်လွှမ်းမိုးထားနိုင်ပြီ။ သူသည် ဒီမြို့တွင် သြဇာအကြီးဆုံး လူတစ်ယောက် ဖြစ်သလို မဟုတ်တာအကုန်လုပ်သော လူ တစ်ရာကျော် က သူဖြစ်ချင်တာအားလုံးကို လုပ်ပေးနိုင်နေလေပြီ။ “ငါစောင့်နေတာကြာပါပြီ” ဝဏ္ဏ တိုးတိုးပြောသည်။ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်သောအသံသည် စုအောင် ၏ အကြောက်တရားကို တိုးပွားစေသည်။
“သတိထားပါ ဝဏ္ဏ…” သူ မ စပြောသည်။ စိုက်ကြည့်နေသော သူ့ မျက်လုံးအောက်မှ ဘယ်လို လွတ်နိုင်မည်ကို စဉ်းစားနေသည်။ သူမ အတော်ပင် ထိတ်လန့်နေပြီ။ သူ့ကို ခွေးဟောင်သလို မဟောင်နိုင်တော့။ သူ့ ခြံဝန်းအတွင်းဝယ် ချက်ခြင်း ကျေမွသွားတော့ မည့် ပုံ။ “ငါ့ကို ဝဏ္ဏ လို့ ခေါ်တဲ့သူမရှိတာ ကြာပြီလေ” သူ ဖြည်းဖြည်းပြောသည်။ သူမ သိပါသည်။ သူ့သတင်းများကို သူမ ကြားနေရသည်။ သူ့ကို မလေးစားသော်ငြား ကြောက်ရွံ့ရိုသေကြရသည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ သည် ဒီ မြို့တွင် ခုလို အတင်းများ၏ ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ “ဆောရီး” သူမ တောင်းပန်သည်။ ပေါင်ပေါ်မှာ လက်များကို ကန်တော့သလို ဆုတ်ထားသည်။ “ဦးစောဝဏ္ဏ။ တို့မှာ အောင်မြင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးတော့ မရှိခဲ့ဘူးဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒါ ငါ ဘာမှ လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာ ငါ အမှန်အတိုင်းပြောချင်ပါတယ်။” “ဟင်။ တကယ်လား” သူကမေးသည်။ မျက်လုံးများက ဝမ်းသာ စိတ်နှင့် ပြူးသွားသည်။ “တကယ်ပါ” စုအောင် ထပ်ပြောသည်။ ဦးစောဝဏ္ဏသည် အသာထလိုက်ပြီး ခဏ တိတ်ဆိတ် နေသည်။ ခုလို ဆက်ဆံရေးမျိုးကြောင့် ပင် ခုချိန်မှာ သူကလေးဘဝက ထက်ပင် သူမကို လိုချင်နေသေးမှန်း သတိထားမိသည်။ သူ့ အတန်းပိုင်ဆရာမဖြစ်ခဲ့ပြီး သူ့ဘဝကို ချေမှုန်းခဲ့ သူကို ခုချိန်တွင် သူ့လက် မမြှောက်ရပဲ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ချေမွ ပစ်နိုင်နေလေပြီ။ “ငါ့ ကို ခုလိုမျိုးအခြေအနေမို့ ခွင့်လွှတ် ပေးနိုင်ပြီပေါ့။ ဟုတ်လား ” သူ တိုးတိုးပြောသည်။ သူမကို အရှက်ရလောက်အောင် စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်နေ သည်။ “ဟုတ်ဘူးလား” သူမ ငြိမ်သွားသည်။ “ပထမတစ်ချက် က မင်းကိုမင်း ကယ်ဆယ်ဖို့အတွက် ငါ့ဘဝကို ချိုးဖျက် ပစ်ခဲ့တယ်။ နောက်တော့ ငါ့ ခြေထောက်အောက် ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ အဲတော့ မင်း လုပ်ခဲ့တာ မမှားဘူးဆိုရင် ငါ့ကို နောက်တစ်ခါ အဲဒီလို ပြန်လုပ်လေ။” စုအောင် ၏ မျက်လုံးများက သူလှောင်ပြောင်နေမှန်းသိ၍ မည်းမှောင်သွားသည်။
“အဲလို မဟုတ်ပါဘူးဟယ်” သူမ တီးတိုးရေရွတ်သည်။ စားပွဲကို လက်နှင့် ဆုတ်ကိုင်သည်။ “ရှင့်ကို ဒုက္ခရောက်အောင် ကျွန်မ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူးရှင်။ ကြိမ်ဆို ကြိမ်ရဲပါတယ်” “ဟ ငါ ဘယ်လိုလုပ်ယုံရမှာလဲ” ဦးစောဝဏ္ဏ မေးသည်။ အသံက အရှိန်အဝါကြီးသည်။ သူမတုန်ခါနေမှန်း သူသိသည်။ ခြေထောက် နှစ်ချောင်း က ပူးနေသည်။ ကြောက်စိတ်ဖြင့် သူမ ရမ္မက်စိတ်တွေ ထနေလေပြီလား။ “မကောင်းဘူးလေ” စုအောင် ရှင်းဖို့ကြိုးစားသည်။ “ရှင့်ကို ကျွန်မက ဖျားယောင်းခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲ။ ဒီတိုင်းနေခဲ့ရင် အဲလို အဓိပ္ပာယ် ပေါက်သွားမယ်လေ” မှန်ပါသည်။ သူလုပ်ခဲ့တာ မကောင်း။ “ဦးစောဝဏ္ဏ” ကို သူမ ဖျားယောင်းလို့ မရနိုင်တော့ပေ။ သူ့ရည်းစားက မှောင်ခို သူဌေးအုပ်စုတစ်ခု ထံမှ ငွေချေး သောအခါ သူမ ဝမ်းမသာနိုင်ခဲ့။ အထူးသဖြင့် ငွေထုတ်ပေးသူမှာ ဝဏ္ဏမှန်း သိသောအခါ။ သူမ အိမ်ကို ပေါင်ထားမှန်း သိလိုက်ရသည်။ ပြန်လည်း မဆပ်နိုင် သောအခါ… ဦးစောဝဏ္ဏ ကို သူ့အဖြစ်အား ရှင်းပြသည်။ သူမ၏ ဖြေရှင်းချက် ဆုံးသည်အထိ ဘယ်လို ဒုက္ခမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ကို သဘော မပေါက် နိုင်သေး။ ဦးစောဝဏ္ဏ သည် ဒီဇာတ်လမ်းကို ကောင်းစွာသိပြီးဖြစ်သည်။ ဒါတွေကို သေချာမသိပဲလည်း ဒီလို ချမ်းသာလာမည် မဟုတ်ပေ။ သူမအိမ်အားပေါင်၍ ပိုက်ဆံချေးမည်ကို သူသိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်လည်း ခုအခြေအနေရောက်လာခဲ့ပြီ။ ပိုက်ဆံကို သူစိတ်မဝင်စား။ သူမကို လက်မြှောက်လာစေရန်သာ စဉ်းစားခဲ့သည်။
အခြေအနေက စုအောင် ဖက်မှာ မရှိတော့မှန်းသိသည်မို့ ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေသည်။ မျက်ရည်တော့မကျ။ ဦးစောဝဏ္ဏ ဘာလုပ်မည်ကို စောင့်ကြည့်နေသလိုပင်။ သူ ဘာတွေးနေမည်ကို သူမမသိ။ ကျောင်းသားဘဝက သူမကို စိတ်ဒုက္ခပေးခဲ့သော ဒီ လူငယ်လေးသည် အရင်လို လုံးဝမဟုတ်တော့ပေ။ သတ်ယတ်စွာ ဝတ်စားထားသည်။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချမှုက အရောင်တောက်လျက်ရှိသည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ ခုံမှာပြန်ထိုင်လိုက်သည်။ စုအောင် တစ်ယောက် အခြေအနေကို သဘောပေါက်သွားမှန်း သိ၍ ကျေနပ်နေသည်။ ခုတော့ သူသနားမှုကို ခံယူရမည့်အခြေအနေ။ “ငါ့ငွေကို မင်း ဘယ်လို ပြန်ပေးဖို့ စိတ်ကူးထားလဲ” အသာမေးသည်။ သူမ ပါးစပ်ဟ၍ ဒီငွေကို သူမချေးခဲ့တာမဟုတ်မှန်းပြောဖို့စဉ်းစားသည်။ သို့သော် အခြေအမြစ်မရှိမှန်းသိ၍ မပြောနိုင်။ “စိတ်ကူးမရှိဘူး။ ဘယ်လောက် အကြွေးတင်နေပြီမှန်းလည်း မသိဘူးမဟုတ်လား” သူ ဆက်ပြောသည်။ “သိန်း လေးရာရှိပြီ ကလေးမ။ မင်း အိမ်ကို ငါပိုင်နေပြီ။ ငါ ယူလိုက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။” စုအောင် မျက်လုံးကို မှိတ်လိုက်ပြီး မျက်ရည်ပေါက်များလိမ့်ဆင်းလာသည်။ အိမ်ကိုသာသိမ်းလိုက်လျှင် သူမမှာ ဘာမှ မရှိတော့။ တစ်သက် လုံး လုပ်ခဲ့တာတွေ ကုန်တော့မည်။ သူမ ခေါင်းကို လက်နှင့် အုပ် ပြီး ငိုက်စိုက်ချ၍ တိုးတိုးပြောသည်။
“အဲလို မလုပ်ပါနဲ့ ဝဏ္ဏရယ်။ မတရားပါဘူး” “ဘာမတရားလို့လဲ” သူမေးသည်။ “ငါ့ကို မုဒိမ်းမှုနဲ့ တိုင်တုန်းကရော မတရားဘူးလို့ မထင်ခဲ့ဘူးလား။ ငါ့ဘဝ တစ်စစီဖြစ်သွားတယ်လေ။ ငါ အဲလောက် ထိ မလုပ်သေးလို့ မတရားဘူးလို့ပြောချင်တာလား” “ကျွန်မ အဲလိုမရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး ဝဏ္ဏ၊ ရှင်သိပါတယ်” စုအောင် “ရှင်က ကျွန်မ လက်တွေကို ကိုင်ပြီး နံရံနဲ့ကပ် ချုပ်ထားတယ်။ အဲဒါတွေပဲ ပြောခဲ့တာလေ” “မင်းအဲဒီတုန်းက နေခဲ့တဲ့ပုံနဲ့ ဘယ်လိုမှ မဟုတ်ဘူး ခွေးမရဲ့” ဦးစောဝဏ္ဏ ဆက်ပြောသည် “ဖာသည်မလို ပဲ မင်း ညည်းညူနေတယ်။ အဲဒါကော မဟုတ်ဘူးလား။ သွားပါရစေလို့လည်းပြောတယ်။ ငါ က လွှတ်လိုက်မိတယ်။ မင်း သဘောကျလက်ခံခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ အဲဒါတွေကို သူများသိမှာ။ ငါလျှောက်ပြောမှာစိုးလို့ ကိုယ့်ဖင်ကိုယ် ကယ်ချင်တာနဲ့ငါ့ကို ငရဲရောက်အောင်ပို့ခဲ့တာမဟုတ်လား” စုအောင် အကြာကြီးတိတ်ဆိတ်နေသည်။ နောက် တုန်လှုပ်စွာ သက်ပြင်းချပြီး “အခု ကျွန်မဆီက ဘာလိုချင်လို့လဲ ဦးစောဝဏ္ဏ?” မေးသည် “ဘာပဲလိုချင်လိုချင် ပေးပါ့မယ်ရှင်။ ခုတော့ သွားပါရစေတော့” ဦးစောဝဏ္ဏ အဓိပ္ပာယ်ရှိစွာပြုံးသည်။ “ငါ့ဆီက ထွက်သွားဖို့ အဲလောက် လွယ်မယ်ထင်လို့လား ကလေးမရဲ့” “ဆယ်နှစ်လောက် မင်းလက်ချက်နဲ့ ငါ ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ပြီး အသာလေးလွတ်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်လို့ မင်းထင်သေးလား”အသံကို အသာနှိမ့်ပြီး ပြောလိုက်သည်။ အသံမှာ ရမ္မက်သံတွေလွှမ်းနေသည်။ စုအောင် တံတွေးမျိုချလိုက်သည်။
“အဲတော့…” သူတိုးတိုးပြောသည်။ ကြောက်ရွံ့မှုဖြင့် အသံက တုန်နေသည်။ “ရှင် ဘာများ…?” “သိန်းလေးရာလောက်ကို ငါ ဂရုစိုက်မယ်ထင်လို့လား ဟင်” ဦးစောဝဏ္ဏ မေးသည်။ စုအောင် နားမလည်။ “ငါက ငွေလိုချင်တာ မဟုတ်ဘူးဟဲ့။ မင်းကို ခံစားစေချင်တာ။ မင်းခံရတာ မြင်ချင်တာ။ မင်းခံစေရမယ်။ မင်းငါ့ကို မုဒိမ်းကောင်လို စွတ်စွဲတုန်းက ငါခံခဲ့ရသလို နိမ့်ကျစေရမယ်။ ငါပြောသလို လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မင်း မသေ သေးဘူးပေါ့လေ။” စုအောင် တိတ်ဆိပ်စွာထိုင်နေသည်။ စိတ်ကြပ်တည်းမှုကို သူမ သည်းမခံနိုင်တော့သည့်အခါ “အဲတော့ ဘာလုပ်မှာလဲဟင်” သူမ အသာ မေးသည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ ထရပ်လိုက်ပြီး စုအောင် ၏ ခုံဖက်သို့ လျှောက်လာသည်။ သူမကို ဆွဲရပ်လိုက်ပြီး နံရံနှင့် ကပ်မိသည်အထိ တွန်းသွားသည်။ “ကဲ။ ကလေးမ” သူချိုသာစွာ တိုးတိုးပြောသည်။ လက်က မေးစေ့ကို ကိုင်ပြီး မျက်လုံးချင်းဆိုင်ကြည့်သည်။ “ငါ လိုချင်တာအားလုံး မင်းလုပ်ပေးရမယ်။ ငါ လုပ်ချင်သလောက်ထိ မင်းနေရမယ်။ ငါကျေနပ်တဲ့အထိပဲ။ ငါပြောတဲ့အတိုင်း အတိအကျ မလုပ်ပဲ အတွန့်တက် မယ်ဆိုရင်တော့ ချီးထွက်အောင်ရိုက်ပြီး လုပ်အောင် ခိုင်းမှာပဲ။ နားလည်လား” စုအောင် ဦးစောဝဏ္ဏ ကိုယ်ခန္ဓာအနီးကပ်လျက် တိုးတိုးညည်းသည်။ သို့သော် ခေါင်းက နာခံစွာ ငြိမ့်သည်။ သူမ ဘယ်လိုမှ မလွတ်နိုင်။ တခြားနည်းလမ်းမရှိ။ သူက ပြုံးသည်။
နံရံကို ကျောမှီစေပြီး လက်များကို နောက်ပစ်စေသည်။ “အရင်အတိုင်းပဲပေါ့” ပြောပြီး သူ့လက်များက သူမရင်သားများကို ဆုတ်ကိုင်သည်။ စုအောင် မျက်လုံးများကို ကြောက်ရွံ့စွာမှိတ်ထား သည်။ အရင်အတိုင်းတော့ဟုတ်သည်။ အရင်ထက် ဆိုးပါသည်။ ဆယ်နှစ် အကြာတုန်းက သူမသည် လူအများရှိရာ ကျောင်းဝန်းမှာမို့ လွတ်လမ်းအများကြီးရှိသည်။ ခုတော့ သူမသည် ဦးစောဝဏ္ဏ၏ သနားမှုမှလွဲ၍ လွတ်လမ်းမရှိ။ သူကလည်း သနားမည်မဟုတ်။ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာက မာကျောနေသည်။ သူမကို ကောင်းစွာလွှမ်းမိုးထားနိုင်သည်။ ရုန်းလို့လည်း ဘယ်လိုမှမလွတ်နိုင်။ “ငါက မုဒိမ်းကောင်ဖြစ်နေပြီ မိန်းကလေး” သူတိုးတိုးပြောသည်။ လက်များ က နို့ကို နာလာသည်ထိ ညှစ်ထားသည်။ “ငါက အဲဒီဘဝ မှာ ပျော်တတ်နေပြီ” သူမကို အသာနမ်းသည်။ တစ်ချိန်က အရသာမျိုးပင် ပြန်ရသေးသည်။ သူမ ညည်းသည်။ သူ့ ပစ္စည်းကြီးက သူမဗိုက်ကို ထိုးနေသည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ က လျှာကို စုအောင်၏ လည်မျိုဆီပို့လိုက်ပြီး ဆက်နမ်းနေကာ လက်များက ရင်အုံမှသည် အတွင်းခံဘောင်းဘီဆီ ရွှေ့သွား သည်။ အစေ့ကို လက်မနှင့် ပွတ်ရင်း လက် ချောင်း နှစ်ချောင်းကို အတွင်းထဲနှိုက်ကာ ဖြည်းဖြည်းမွှေ့နေသည်။
အကုန်လုံးက ကျောင်းမှာ လုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းပင်။ “ငါ့ကို တော်ပါတော့လို့ ပြောအုံးမလား ကလေးမ” စုအောင် မျက်နှာမှာ မျက်ရည်များ ရွဲကျလာသည်။ သူမသည် ဖြစ်သင့်သည်ထက်ပို၍ ရမ္မက် ထနေမှန်း သတိထားမိသဖြင့် အလွန်ရှက်မိသည်။ သူက သိနေသည်။ အစေ့ကို လက်မဖြင့် ပွတ်သတ်မှုက သူမကို ရူးသွတ်စေသည်။ သူ့ပါးစပ်က လည်တိုင်ကို စုတ်နေဆဲ။ စုအောင် ရမ္မက် အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်တော့မတတ်ဖြစ်၍ ညည်းသံ ထွက်လာသည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ၏ ပွတ်နေသော လက်များအတိုင်းပြန်လှုပ်ခါ ပေးနေမိသည်။ သူမ ပြိုလဲမကျသွားအောင် လျှာကို ကိုက်ထားမိသည်။ သူ့လက်ချောင်းများ ရုတ်တရက် ဆွဲထုတ်သွားပြီး နောက်ဆုတ်သွားသောအခါ ဟာကနဲဖြစ်သွားသည်။ ခုတော့ သူမသည် သူ့လက်ထဲရောက်နေပြီ။ ဦးစောဝဏ္ဏ က ဆွဲ လုပ်ပစ်ချင်နေပြီ။ သို့သော် သူ စောင့်ခဲ့သည်မှာ ဆယ်နှစ်တောင် ရှိပြီ မဟုတ်ပါလား။ မိနစ်အနည်းငယ်တော့ စောင့်နိုင်ပါသေးသည်။ သူမကို ပိုမို အရှက်တကွဲနှင့် မအီမသာ ဖြစ်အောင် လုပ်ရဦးမည်။ သူမ အသက်မရှူနိုင်။ ကျေနပ်နေသောမျက်နှာတွင် ဒေါသနှင့် ရှက်ကြောက်မှုတို့ လွှမ်းသွားသည်။ သူမ၏ ဒူးထောက် တောင်းပန်မှု မြေလှိမ့် ငိုကျွေးမှုကို လိုချင်သည်မဟုတ်။ အဲလိုဖြစ်၍ သူဘာမှ မရ။ စားပွဲဆီ ပြန်လျှောက်လာပြီး သူ့ အပေါ်ဝတ် ဂျက်ကက်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက် သည်။ နက္ကတိုင်ကို ဖြုတ်သည်။ အင်္ကျီ ကြယ်သီးများကို ဖြုတ်သည်။
အင်္ကျီကို အသာချွတ်လိုက်ပြီမှ စုအောင် မျက်နှာဖက် ပြန်လှည့် လိုက်သည်။ “ဒီကိုလာ” သူ တိုးတိုးညင်သာစွာပြောသည်။ သူမ ခဏတွေရပ်စဉ်းစားနေသည်။ သူမသည် သူပြောသမျှ ကျွန်တစ်ယောက်လို မလုပ်လို။ သူမကို အရှက်ပိုရအောင် လုပ်နေမှန်းသိသည်။ သို့သော် ရွေးစရာလမ်းမရှိပေ။ ရှေ့သို့အသာလျှောက်ပြီး နာခံမှုကိုပြသည်။ သူက မအံ့သြ။ “လာလေ” ထပ်ပြောသည်။ အသံက မာလာသည်။ သူသည် နှစ်ကြိမ်ပြောလေ့မရှိ။ မျက်လုံးများ တောက်လာသည်။ စုအောင် တံတွေးမျိုချ ရင်း အမိန့်အတိုင်းလုပ်သည်။ သူ့လက်တစ်ဖက်က သူမလည်ပင်းနားရှိ ဆံပင်ကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး ဒူးထောက်ထိုင်စေရန် ဆွဲနှိမ့်ချလိုက်သည်။ သူဘာလုပ်စေချင်မှန်းသိသာသော်လည်း စုအောင် က ဘာမှ မတုန့်ပြန်ပဲနေသည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ စုအောင်၏ မေးစေ့ကို ဆွဲညှစ်ပြီး သူ့မျက်လုံး နှင့် ဆိုင်မိအောင် လုပ်သည်။ “မင်းမှာ ရွေးစရာ နှစ်မျီုးရှိတယ်” သူ တင်းတင်းပြောသည်။ “ငါ့ကို မှုတ်ပေးမလား။ မလုပ်ပဲနေမလား။ မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ မင်းနောင်တရ လိမ့်မယ်။ သဘောပဲ” သူမကိုရွေးစရာ အခွင့်အရေးပေးပါသည်။ သို့သော် မလုပ်သည့်ဖက်ရွေးလျင် သူမ နှိပ်စက်ခံရမည့်သဘော။ (ခံရပြီးလျှင် လည်း လုပ်ပေးရ မည့်သဘောပင်ဖြစ်သည်။) စုအောင် မေးစေ့ကို မြှောက်ပြီး ဒီတိုင်းရပ်နေသည်။ မလှုပ်။ ဦးစောဝဏ္ဏ မျက်ခုံးပင့်ကြည့်သည်။ “ရွေးမယ်ပေါ့ ဟုတ်လား” “မင်းငါ့လီးကို စုတ်ပေး။ ဒါမှမဟုတ်ရင် အပြင်မှာရပ်နေတဲ့ လူဆယ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ချင်းစုတ်ပေးပြီးမှ ငါ့ကို စုတ်ပေး။ ရတယ်။ ငါ့ကိုမစုတ်ခင် လေ့ကျင့်ရေးဆင်းချင်တယ်လို့ ထင်ရင်လည်း သဘောပဲလေ။” စုအောင် မျက်နှာ မည်းမှောင်သွားသည်။ သူမ မလုပ်ပဲနေဖို့ စဉ်းစားထားသည်။
သို့သော် လူအများရှေ့တွင် ပို၍ အရှက်ကွဲရမည့် အခြေအနေ။ သူ့ကိုရွေးခိုင်းသည်မှာ အဆိုးနှင့် ပို၍ ဆိုးသောအခြေအနေကို ရွေးခိုင်းခြင်းသာ။ သူမ ထိုင်ချလိုက်သည်။ သူ့ပေါင်ကြားကို အသာပွတ်ပေးသည်။ ထို့နောက် သူ့ခါးပါတ်ကို အသာ ဖြည် လိုက်ပြီး ဘောင်းဘီ ဇစ်ကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ရသည်။ စဉ်းစားရင်းပင် တံတွေးမျိုချသည်။ သူ့ပစ္စည်းက အတော်ကြီးသည်။ စုအောင် တော့ အတွက် တော်တော်ခက်တော့မည်။ ပေါင်ကြားထဲ သို့ လက်ကိုပြန်ပို့လိုက်ပြီး အသာ ဂွင်းထုပေးသည်။ အရေပြားအောက်က ကြွက်သားများအား ခံစားနေသည်။ သူ့အဝတ်အစားသည် ပွယောင်း ယောင်း မဖြစ်။ သူ့ခြေထောက်များကလည်း လှပသည်။ စုအောင် လက်ဖဝါးကို တံတွေးဆွတ်လိုက်ပြီး သူ့ ပစ္စည်းကြီးကို သုတ်လိမ်း လိုက်သည်။ သူမအား အားပေးလိုက်သော ညည်းသံကို စုအောင် ကြားရသည်။ သူ့လီးကြီးအောက်ခြေမှ ထိပ်ဖျားထိ လျှာနှင့်ပွတ်ဆွဲလိုက်သည်။ ဥများ ကို အသာ လျက်လိုက်ပြီး မှ လထစ် ထိပ်ဖျားကို လျှာနှင့် ကလိသည်။ လီးကြီးကို စုအောင် စ စုတ်လိုက်သည်နှင့် အရသာ၏ တုန့်ပြန်မှုအဖြစ် ဦးစောဝဏ္ဏ ချိုသာစွာညည်းငြူသည်။ သူ့လက်များက သူမ ဆံပင်နှင့် ကုတ်ပိုးကို အသာ ပွတ်ပေးသည်။ ယခုလို ချမ်းသာလာသည်အထိ သူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော အောင်မြင်သည့် တိုက်ပွဲများ၊ အထူးသဖြင့် သူ့ အကြီးဆုံးပြိုင်ဖက်ကို သူ့လက်နှင့် သတ်ခဲ့နိုင်သည် တို့ထက် ယခု ရရှိသော ခံစားချက်က ပို၍ သာသည်။
မျက်လုံး များကို မှေးမှိတ်ပြီး စုအောင် က သူ့ဥများကို စုတ်ရင်း ညှစ်ပေးနေသည်ကို ဖီလင်ယူနေသည်။ မျှော်လင့်ထားသည်ထက် မြန်မြန် သူ အရည်ထွက်ပြီး ပြီးသွားအောင် သူမလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သူတအံ့တသြဖြစ်သည်။ သူမ ဖြည်းညှင်းစွာ ထရပ်သည်။ သူမမေးစေ့ပေါ်ကျနေသော သုတ်ရည် စက်တချို့ကို လက်ဖြင့် သုတ်ပြီး ပါးစပ်နှင့် စုတ်ယူသန့်ရှင်းလိုက်သည်။ လရည် ကို အရသာခံနေပုံရသည်။ ဒီလိုနှင့်ပြီးပါ့မလား။ ဦးစောဝဏ္ဏ က အခန်းအပြင်က လူတစ်ယောက်ကို လှမ်းခေါ်လိုက်သဖြင့် စုအောင် အလန့်တကြားအသံထွက်သွားသည်။ ဝင်လာသူမှာ သူမကို အိမ်မှာ လာခေါ်ခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်သဖြင့် မြင်ဘူးပြီးသားဖြစ်သည်။ သူမအိမ်သို့ အတင်းဝင်လာပြီး သူမကို ဒူးထောက်ခိုင်းခဲ့သည်။ သူမပါးကို ကိုင်ပြီး သူ့ကို မော့ကြည့်ခိုင်းခဲ့ဘူးသောသူဖြစ်သည်။ အရပ်က ဝဏ္ဏထက်ရှည်သည်။ သိပ်တော့ မထွား။ ဦးစောဝဏ္ဏ က ဇော်ဦးကို ဝင်လာခိုင်းလိုက်ပြီး စုအောင် မကြားအောင် တိုးတိုး ကပ်ပြောသည်။ သူမ မကြားချင်သောစကား လည်း ဖြစ်မည် မှာ သေချာပါသည်။ ထို့နောက် စုအောင် ဆီ ပြန်လျှောက်လာကာ နောက်ကျောမှဆွဲယူပြီး နားနားကပ်ပြောသည်။ “မင်း ပါးစပ်က သိပ်ကောင်းတာပဲ ကလေးမ” ချိုသာစွာပြောသည်။ လက်တစ်ဖက်က သူမမေးစေ့ကို ကိုင်ထားသည်။ “မင်း ပုလွေမှုတ် ပေးတာက ငါ့ရဲ့ ဒေါ်လာတစ်ထောင်တန် ဖာသည်မတွေအတိုင်းပဲ။ ငါ့လထစ်ကို စုတ်ရင်း မင်း ကျေကျေနပ်နပ် ညည်းနေတာလည်း ကြားလိုက်တယ်။” စုအောင် သူ၏ အလွန်ရိုင်းပြသော စကားကြောင့် တုန်သွားမိသည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ ကပြုံးနေသည်။ စကားထပ်မပြောခင် သူမ နားရွက် ဖျားကို အသာပွတ်သည်။
“ဇော်ဦးကို မင်းမှတ်မိတယ်မဟုတ်လား။ ဒီကို ခေါ်လာခဲ့တာလေ” စုအောင် အသာခေါင်းငြိမ့်သည်။ “ဟုတ်ပြီ။ သူက ငါ့ရဲ့ လက်ယာရံ ပဲ။ ငါ့ မိန်းမထက်တောင် ပိုယုံကြည်ရတဲ့သူ” ဘာအဓိပ္ပာယ်ပါလိမ့် “ငါ့အတွက် ဆို အသေအလဲ ကြိုးစားလုပ်ပေးတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ” ဝဏ္ဏ ဆက်ပြော သည်။ “ကြိုးစားတဲ့သူဆိုတော့ဆုချရသင့်တာပေါ့ ဟုတ်လား” “ဒီမနက် သူ မင်းကို ကောင်းကောင်း ဆက်ဆံတယ် မဟုတ်လား။ နောက်တစ်ယောက်က မင်း မျက်နှာကို လိုးမလို့လုပ်နေတာကို သူက တားပေးခဲ့တယ်လေ။ တန်ပါတယ်။” တစ်ယောက်က သူမ လက်များကို ချုပ်ပြီး ထခိုင်းခဲ့သည်။ သူမက ပေါင်ကြားကို ပိတ်ကန်ကာ မျက်နှာကို ဖြတ်ရိုက်ခဲ့သည်။ ဒါ့ကြောင့် သူမကို တွန်းလှဲပြီး ပါးစပ်ထဲ လိုးထည့်ဖို့ကြံနေတုန်း ဇော်ဦး ရောက်လာပြီး တစ်ခွန်းတည်းနှင့် တားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “ကျေးဇူးတင်စကားမပြောတော့ဘူးလား” ဦးစောဝဏ္ဏ မေးသဖြင့် စုအောင် ခေါင်းကို အသာခါသည်။ ဒီပြန်ပေးသမားများကို သူမ ကျေးဇူး တင်စရာမရှိပါ။ “ခု က ကျေးဇူးဆပ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲဟ” သူမ တုန်ယင်စွာ သက်ပြင်းချသည်။ “ကဲ ငါ့ကို လုပ်သလိုပဲ သူ့ကို လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီထက်မပိုပါဘူး။ နင့် ပါးစပ်ရဲ့ အစွမ်းကို ပြရုံလေးပဲ” ဦးစောဝဏ္ဏ စုအောင် ကို သူ့ဆီ အသာတွန်းလိုက်သည်။ သူမ ဦးစောဝဏ္ဏ ၏ စားပွဲကို မှီရပ် နေသော ဇော်ဦးထံ လျှောက်သွားလိုက်ရ သည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ ကို ပလွေ မှုတ်ပေးရသည်ထက်ပင် ပိုရှက်မိသည်။ ဒီလူက သူမ လုံးဝမသိသော အစိမ်းသက်သက်မဟုတ်ပါလား။ သူ့ ရှေ့မှောက်တွင် ဒူးထောက်ပြီး စုတ်ပေးရမည်မှာ နိမ့်ကျလွန်းလှသည်။ သို့သော် သူမမှာ ရွေးချယ်စရာ လမ်းမရှိ။ တစိမ်းတယောက်ဆီ လျှောက်သွား၊ ဘောင်းဘီချွတ်ပေးပြီး ပုလွေမှုတ်ပေးရမည်မှာ မဟုတ်သေးဘူးဟု ထင်သည့်အတွက် စုအောင် ဒူးမထောက်မှီ ဇော်ဦး၏ ရင်ပတ်ကို ပွတ်လိုက်ကာ ခေါင်းမော့ပြီး နမ်းလိုက်သည်။ သူ့နှုတ်ခမ်းများက အံ့သြဖွယ် နူးညံ့ကြောင်း သိလိုက်ရ ပြီး သူ့လက်များက သူမ ဆံပင်များကို ထိုးဖွရင်း ပြန်နမ်းလိုက်သဖြင့် ညည်းတွားမိသွားသည်။
သူမလက်များကို အသာလျှောချကာ သူ့ဘောင်းဘီကို ဖြည်ပေးနေသည်။ သူမ၏ နှာခေါင်းများက သူ့ လမွှေးများ နှင့် ထိမိသည့်တိုင်အောင် လီးကြီးကို စုတ်မျိုလိုက်သောအခါ ဇော်ဦး တအင်းအင်းနှင့် ဖြစ်နေသည်။ ခေါင်းကိုပြန်နောက်ဆုတ်လိုက်ပြီး လထစ်အောက်ပိုင်းကို လျှာနှင့်လျက်ပေးနေသည်။ လက်တစ်ဖက်က အရင်းကို ဆုတ်ကိုင်ကာ အားတက်သရော စုတ်ပေးနေသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်နှင့် ဇော်ဦးသည် သူ့ကိုယ်သူ မထိန်းနိုင်တော့ကြောင်းသတိထားမိသွားသည်။ “အောင်မယ်လေး ကလေးမရယ်” ညည်းတွားရင်း စုအောင်၏ ဆံပင်များကို ထိုးဖွရင်း အတင်းတိုးကပ်ကာ “ငါပြီးတော့မယ် အင်း အင်း……” သူ၏ လရည်များသည် စုအောင်၏ လည်မျို အတွင်းသို့ ပြေးဝင်သွားကာ သူမက လည်း ပို ဖီးလ် တက်အောင် အားစိုက်စုတ်ယူလိုက်သည်။ ဇော်ဦးကလည်း သူမခေါင်း ကို အတင်း ဖိထားလိုက်ပြီးမှ သူမ အသက်ရှူရခက်နေမှန်းသတိထားမိသွားသဖြင့် ပြန်ဖြေလျှော့ပေးလိုက်သည်။ သူ့ကိုယ်သူ ပြန်ထိမ်း မတ်နိုင်သည်နှင့် ဇော်ဦး အခန်းထဲကထွက်သွားသည်။ စုအောင် က ဦးစောဝဏ္ဏဖက် ပြန်လှည့်လိုက်သည်။ သူမသည် ကလဲ့စားချေခံရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဟု ပြလိုက်သည့်သဘော။ သူသည် ဇိမ်ကျသော ကုလားထိုင်ကြီးတွင် ထိုင်ရင်း မှီနေကာ မျက်နှာထားကို မမှန်းတတ်အောင်ရှိသည်။ သူ့အနားလာရန် မျက်ရိပ်ပြလိုက်သဖြင့် စုအောင် ရှေ့တိုးသွားလိုက်သည်။ သူမ ကိုယ်ကတော့ တုန်ခါနေသည်။ အနီးသို့ရောက်သည်နှင့် ဦးစောဝဏ္ဏ က ဆွဲယူလိုက် ရာ စုအောင် သူ့ ပေါင်ပေါ်တွင် ဖင်ထိုင်မိလျက်သားဖြစ်သွားသည်။ စုအောင် တစ်ယောက် ဦးစောဝဏ္ဏ ပေါ်ထိုင်မိပြီး သူ့ ပစ္စည်းကြီး၏ နွေးထွေးမာကျောမှုက သူမ နှလုံးခုံနှုန်းနှင့် အသက်ရှူသံကို မြန်စေသည်။
သူမ ကိုယ်ခန္ဓာသည် တောင့်တင်းလျက် သူ့ပေါ်ဖိထိုင်ရမည်လား အသာဖွ နေရမည်လား ဝေခွဲမရဖြစ်နေသည်။ “ဇိမ်ကျနေလား ကလေးမ” စုအောင်၏ ဆံပင်များကို ဖွရင်း ဦးစောဝဏ္ဏ ကမေးသည်။ “ဟေ။ ငါ့အတွက် ထန်နေတုန်းပဲလား” စုအောင် ရှက်ရှက်နှင့် မျက်နှာလွှဲဖို့ကြိုးစားသည်။ သို့သော်မလှည့်နိုင်ရန် ဦးစောဝဏ္ဏ က ဆံပင်များကို ဆွဲထားသည်။ “ရွှဲနေတုန်းလား” တိုးတိုးထပ်မေးသည်။ “မသိဘူး” စုအောင် မဖြေချင်သဖြင့် လွှဲပြောသည်။ သူမ ပါးတို့ နီရဲတွတ်နေသည်။ မျက်ရည်များလည်း ဝဲလျက်။ ဦးစောဝဏ္ဏ ပြုံးရင်း စုအောင် နားရွက်နားကပ်ပြောနိုင်အောင် ဆွဲဖက်လိုက်သည်။ “အချစ်လေး” သူရေရွတ်သည်။ စုအောင် သွေးတို့ ဆူလာသည်။ “ငါ မင်းကို ဆွဲချပြီး လီးနဲ့ အဖုတ်ထဲကို အသက်မရှူနိုင်အောင် လိုးမယ်ကွာ။ ငါ့ဖက်က စိတ်မပါလက်မပါနဲ့ လိုးပေးမယ်။ ဟုတ်လား အချစ်လေး” ဦးစောဝဏ္ဏ ၏ စကားသံနောက်တွင် စုအောင် ရှိုက်မိသည်။ ရှိုက်သံသည် ခါးကို အောက်က ဆောင့်တင်လိုက်ခြင်းနှင့်အတူ ငိုသံသို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ သူမတကိုယ်လုံးတုန်ခါနေသည်။ သူ့ကို မည်သို့တုန့်ပြန်ရမည်မှန်းမဝေခွဲတတ်နိုင်။ သေချာသည်ကတော့ သူမသွေးကြောများတလျှောက် အရှက်တရားတို့ လောင်မြိုက်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ လက်များက သူမလုံခြည်အောက်သို့ တို့းဝင်လာကာ အစေ့ကို လက်မနှင့် အသာပွတ်သည်။ သူမ တင်ပါးက သူ့ဖက်သို့ ပိုတိုးလာသည်နှင့် ပွတ်ချက်က ပို မြန်ပိုကြမ်း လာသည်။ အသာညည်းမိခြင်းနှင့်အတူ သူမကိုယ်ခန္ဓာမှ အလိုအလျောက်တုန့်ပြန်နေမှုကို မည်သို့မျှ မထိမ်းချုပ်နိုင်တော့မှန်း ကိုယ်တိုင် သဘောပေါက်လာရသည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ ဆရာမလေးကို ပွေ့ချီရင်း ထိုင်ခုံမှထသည်.။ သူမကို စားပွဲပုံတွင် အသာချပြီး တင်ပါးကို ခုံစွန်းတွင် ကျနေအောင် ရွှေ့ကာ ခြေထောက်များကို ကြမ်းပြင်သို့ တွဲလောင်းကျနေစေသည်။ ထို့နောက် ပေါင်ကြားကိုပွတ်သတ်ရင်း အတွင်းခံကိုဖိကာ ခြေထောက်ကို ကား စေသည်။ လက်ဖဝါးဖြင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီတလျှောက် အထက်အောက် ပွတ်နေခြင်းဖြင့် စုအောင်သည် သူမ၏ လုပ်သမျှ ခံရမည့် အနေအထားကို သတိထားမိသွားသည်။
သူ့လက်မက အစေ့ကိုကြမ်းကြမ်းဖိသည်။ သူမခြေထောက်များကို စေ့ပြီး သူ့ကို တွန်းရန်ကြိုးစား ခြင်းကို သူပြုံးကြည့်နေသည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ က လက်ချောင်းများကို ကကြီးခခွေးရေးနေခြင်းကြောင့် စုအောင်တစ်ယောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုံးဝ မထိန်းချုပ်နိုင်တော့သည့် အခြေအနေတည်း။ လက်မဖြင့် အစေ့ကို လက်မဖြင့်ပွတ်ရင်း လက်ခလယ်ဖြင့် အဖုတ်တွင်းသားများကို မွှေ့နေသည်။ အတွင်းထဲသို့ ထိုးသွင်း လိုက်ရာ သူမ၏ လောင်မြိုက်မှုများ ရုတ်တရက် ငြိမ်းသွားသလိုခံစားရ၍မျှမကြာမီ ချက်ခြင်းပြန်ထုတ်သွားပီး အပြင်နှုတ်ခမ်းများ ကို ပွတ်နေပြန်သည်။ သူမ၏ မချင့်မရဲသံကြောင့် ဦးစောဝဏ္ဏ ပြုံးကြည့်နေသည်။ သူမဘာလိုနေမှန်းသူသိသော်လည်း အလိုလိုက်မည် မဟုတ်ပေ။ ဆက်လက် နှိပ်စက်ရင်း သူ့လီးကို တ လာသည်အထိ စောင့်နေပေသည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ နောက်ဆုံး အလျှော့ပေးသည့်အနေဖြင့် လက်နှစ်ချောင်းပူးကာ စုအောင် အထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ သူမ ခါးကို တွန့်ထုတ် ကာ လက်ကို ပိုနက်နက်ဝင်အောင် ကြိုးစားသည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ က ပြုံးရင်းနှင့်ပင် လက်များကို လှည့်သည်။ စုအောင် ခါးကို ပိုကိုင်းလိုက်ပြီး ကျောကုန်းပါ နောက် တွန်းကာ နောက်ပြန်လိုးသည်။ သူက အလိုက်အထိုက်ပင် လက်ကို ပိုနက်အောင် သွင်းပေးလိုက်ပြီး မှ အသာဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ ခါးကိုညွှတ်လိုက်ပြီး စုအောင် အစေ့လေး လွတ်လွတ်ကင်းကင်း ထောင်တက်လာသည်အထိ ပေါင်ကြားတစ်လျှောက် လက်ဖဝါးဖြင့် တွန်းချဲလိုက်သည်။ ခေါင်းကို အသာလေးညွှတ်ကာ လျှာဖျားလေးနှင့် အစေ့ထိတ်ဖျားကို ညင်သာစွာ ထိလိုက်သည်။
“အင်း.. …” စုအောင် ညည်းသံထွက်လာသည်။ သူမကို တစ်ကြိမ်ထပ်လျက်လေမလားဟု ကိုယ်ကို မြှောက်ပြီး ကြိုသည်။ သို့သော် ဦးစောဝဏ္ဏ က မလှုပ်တော့။ “အင်း..လုပ်ပါရှင်” သူ ပြုံးသည်။ ပြီးတော့ စိုရွှဲနေသော အဖုတ်လေးကို လေနှင့် အသာမှုတ်သည်။ ခေါင်းကို အသာညွတ်ပြန်ကာ အပေါက်ဝကို လျှာနှင့် တပတ်လှည့်ပြီး အစေ့ကို တစ်ချက် လျက်လိုက်ပြန်သည်။ အဖုတ်တစ်ခုလုံးကို လျက် မပေးခင်အထိ ဤပုံစံအတိုင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပ်သည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ လက်ချောင်းများက အဖုတ်ကို လိုးမွှေ့နေရင်း ပါးစပ်နှင့် လျှာက အစေ့ကို ဆက်တိုက်စုတ် ကစား နေသောအခါ စုအောင် ၏ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံ ဖြစ်နေတောသည်။ ဘာကိုမျှ မစဉ်းစားနိုင်။ အသက်ပင်မရှူနိုင်၊ သူမ ပြီးတော့မည် ဆိုသော အသိက လွဲ၍ ဘာမှ မသိတော့။ ခေါင်း ကို အသာပင့်ပြီး ဦးစောဝဏ္ဏကို ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ သက်ပြင်းလေးလေးချလိုက်မိသည်။ သူမမျက်လုံးထဲတွင် လုံးဝ မတူသော လူနှစ်ယောက်ကို မြင်နေသည်။ တစ်ဦးက သူမဘဝကို အနှောင့်အယှက်ပေးရင်း သူမက တစ်ပြန် ဘဝပျက်အောင် လုပ်ခဲ့သော လူငယ်လေး။ ဒီအကြောင်းတွေးပြီး အလွန်အမင်းရှက်မိသည်။ ဒုတိယတစ်ဦးအနေဖြင့်မူ ဒီမြို့တွင် သြဇာ အရှိဆုံးလူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးစောဝဏ္ဏ။ သူ့ကို စာနယ်ဇင်းများကရော မြို့လူထုကပါ ကြောက်ရွံ့လေးစားရသည်။ သူကြိုက်တာ အကုန် လုပ်နိုင်သည်။ လိုချင်တာ အကုန်ရအောင် တတ်နိုင်သည်။
မကြိုက်တဲ့သူကို ချက်ခြင်း ရှင်းပစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ ဦးစောဝဏ္ဏ သည် သူမပေါင်ကြားမှာ ဒူးထောက်ရင်း သူမကို စား သုံး နေသည်။ ကြောက်ရွံ့မိသလို အားကိုးရာမဲ့စိတ်များပေါ်ကာ ကျောခြမ်းသွားမိသည်။ ဒီအတွေးတို့ဝင်သောအခါ စုအောင် တစ်ကိုယ်လုံး တုန်လှုပ်ရသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူမအတွေးတို့ ပစ္ဆက္ခ ၌ ဦးစောဝဏ္ဏ၏ လျှာကြီး သူမအဖုတ်တွင်း လျှောဝင်နေသည်ကို သတိထားမိသည်။ သူက ဘောင်းဘီ ကိုလျှောချထားပြီး အတွင်းခံ မချွတ် ပဲ သူမကို ညှောင့်နေသည်။ စုအောင် တအင်းအင်းနှင့် လက်တစ်ဖက်က ဦးစောဝဏ္ဏ၏ ဆံပင်များကို ဖွလျက် နောက်တစ်ဖက်က တင်ပါးကို ဆွဲကုတ်သည်။ သူက ခပ်ကြမ်းကြမ်း ညှောင့်ရင်း သူမလည်မျိုကို အသာစုတ်သည်။ စုအောင် ဖင်ကို မြှောက်ပေးလာပြန်သည်။ စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းက ဦးစောဝဏ္ဏ ပါးစပ်ကို အောက်ဆွဲချကာ အင်္ကျီကို အသာလှန်ရင်း နို့သီးခေါင်းများကို စုတ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူ မလုပ်နိုင်တော့။ သူမကို သူလုပ်ချင်နေသည်မှာ အတော်ကြာပြီ။ သူမပေးခဲ့သောအရသာ နှင့် တရားရုံး တို့အကြောင်း သတိရ လာသောအခါ စိတ်ကမတည်ငြိမ်နိုင်တော့။ ခု ဆိုလျှင် သူမက သူ့လက်ထဲမှာ။ လိုသလောက် ညှစ်ထုတ်ယူနိုင်နေပြီ။ သူ ရုတ်တရက် သူမ အနားမှခွာလိုက်ပြီး အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကို လုံးဝချွတ်ချပစ်လိုက်သည်။ စုအောင်က သူ့နောက်သို့ လိုက်လာသည်။ ဒီတကြိမ်တွင်တော့ စုအောင် သူ၏ လီးကြီးကို သူမ၏ နှာခေါင်းဖျားနှင့် ဦးစောဝဏ္ဏ၏ ဝမ်းဗိုက်တို့ ထိသွားသည်အထိ ငုံစုတ်ယူလိုက် သည်။
ထို့နောက် ကြမ်းကြမ်း စုတ်တော့သည်။ သူ အံ့သြစိတ်နှင့် မည်တမ်းသည်။ “အိုး။ ငါလိုးမ” သူ့ကိုသူ ချက်ခြင်း ပြီး မသွားအောင် ထိမ်းချုပ်နေရသည်။ သူမ အလိုးခံရခြင်းမှ လွတ်အောင် သူ့ကို အပြီး စုတ်နေခြင်းများလား မဝေခွဲတတ်။ သို့သော် ဒီလို တော့ အဖြစ် ခံ မည် မဟုတ်။ ဦးစောဝဏ္ဏ စုအောင်၏ လက်ကောက်ဝတ်များကို ဆွဲယူကာ သူမခေါင်းပေါ် ဆွဲတင်ချုပ်ထားလိုက်ပြီး နားနားသို့တိုးကပ်ကာ “မင်း က အစုတ်ကောင်းတယ် ကလေးမ” “ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါထပ်မှုတ်ရင်း ပြီးအောင် လုပ်လို့ ရမယ် မထင်နဲ့။ မင်း က အလိုးခံရအုံးမှာ” နောက်ဆုံး စကားလုံးများနှင့် အတူ တင်ပါးဆုံမှ အားများဖြင့် တဆုံး လိုးသွင်းလိုက်သည်။ သူမ၏ မှီတွယ်ရာမဲ့ အဖြစ်၊ ပြင်းထန်သော လိုးချက်များ နှင့် သူမကိုယ်ကို လောင်မြိုက်အောင် သုံးလိုက်သော စကားလုံးကြမ်းကြမ်းများ အားလုံးပေါင်းပြီး စုအောင် သွေးတွေ ဆူနေသည်။ သူမသည် ဒီကိစ္စနှင့် ကင်းသူမဟုတ်ပါ။ သို့သော် သူမကို ချက်ခြင်း သတ်ပစ်နိုင်သော လူတစ်ယောက်နှင့် ခုလိုအဖြစ်မျိုးကြုံရမည်ဟု မမျှော်မှန်း ခဲ့ ဘူးပါ။ အမျိုးသမီး၏ တုန့်ပြန်မှုကို ဦးစောဝဏ္ဏ ခံစားမိသည်။ သူမသည် လွှမ်းမိုးခံရမှုကို ကြိုက်နေပြီ။ သူ့အသံကို အတတ်နိုင်ဆုံး ချပြီး သူ၏ တိုင်းရင်းသားသံ ဝဲဝဲနှင့် နားနားကပ်ပြောပြန်သည်။ “မင်းစောက်ဖုတ်ထဲမှာ ငါ့လီးကြီး တစ်လက်မချင်း တိုးဝင်နေတာ သိနေစေရမယ်။ မင်း အသက်မရှူနိုင်လို့ တောင်းပန်မှ ရပ်ပေးမယ်။ ပြီးရင် ဆောင့်လိုးပေးမယ်။ သိလား ကလေးမ။ ကြယ်တွေလတွေ မြင်သွားစေရမယ်ကွ” စုအောင် သူ့စကားကြောင့် မျက်နှာတွေ ရဲလာသည်။ စောက် နှင့် ချီပြော သောစကားကို သူမ မုန်းသည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ က သိသည်။
ဒါကြောင့် ပင် ရွေးသုံးခြင်းဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ လည်း တုန့်ပြန်မှုရသည်။ သူမတကိုယ်လုံး တုန်ရီလာသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာက တုန့်ပြန်နေမှုကို သူမ အလွန် အမင်း ရှက်မိသော်လည်း ရပ်တန့်မရနိုင်။ သူမတွင် ရပ်ချင်စိတ်လည်း ဖြစ်အောင် လုပ်လို့မရ။ သူမသည် ကြမ်းသည် ရိုင်းသည် သို့သော် ရုပ်က ခန့်ထည်သည်။ အရှိန်အဝါကြီးပြီး လိုတာရနိုင်သူလည်းဖြစ်နေသည်။ ခုလည်း သူမ ကို လိုးချင်နေသည်။ သူမ ကိုယ်ခန္ဓာကို အရသာ ခံချင်နေသည်။ သူမညည်းတွားသံ တားမရပဲထွက်လာသည်။ မခံမရပ်နိုင်ခြင်းလား။ ကျေနပ်ခြင်းလား မသေချာ။ မိန်းကလေး၏ ကိုယ် တုန်ခါလာသည်နှင့်အမျှ ဦးစောဝဏ္ဏ လည်း ပေါက်ကွဲလုဖြစ်လာသည်။ သူခါးကို အသာလှုပ်ပြီး ညှောင့်သွင်းနေသည်။ သူမ မိန်းမကိုယ်ထဲမှ အရည်များက သူ့ ဖွားဘက်တော်ကို ပြုတ်ဆွဲယူနေသည်။ အထုတ်အသွင်းမှာ လထစ်ကိုပင် ချော်ထွက်စေနေသည်။ သူသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျောက်တုံးလိုမာကျော သည်ဟု မှတ်ခဲ့ရာ ခုတော့ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း မတွေးနိုင်တော့။ သူမ မေးစေ့ကို ဆုတ်ကိုင် လိုက်ပြီး မျက်လုံးချင်းဆုံအောင် စိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ “မင်းလိုချင်တယ် မဟုတ်လား အချစ်လေး” သူ့ကိုယ်အောက်မှ အမျိုးသမီးကို တီးတိုးပြောသည်။ “မလိုချင်ဘူးလား” စုအောင် အင်းအင်း အဲ့အဲ့ ညည်းသည်။ အဖြေမထွက်။ ဦးစောဝဏ္ဏ ဒေါသဖြင့် သူ့ပစ္စည်းကို ဆွဲထုတ်နောက်ဆုတ် လိုက်သည်။ ခါးကို ရှေ့ပြန်တိုးကာ သူ့ ပစ္စည်းကို စုအောင် အပေါက်ဝထိသာဝင်အောင် အသာ ထည့်ထားလိုက်သည်။ စုအောင် ညည်းတွားသည်။ ရုန်းသလို ဖယ်သလိုနှင့် ပိုဝင် သွားအောင် တိုးသည်။
သို့သော်သူက အဝင်မခံ။ “ဖြေလေ ကောင်မ” သူမ၏ အဝကို ထိုးမွှေ့နေသည်။ “တစ်ညလုံး မပြီးအောင် လုပ်ထားလိုက်ရမလား ဟင်။ မလိုချင်ဘူးဆိုရင်” စုအောင် မနေနိုင်တော့။ သူမ တစ်ကိုယ်လုံး လောင်မီးကျနေသည်။ သူက ပြောသည့်အတိုင်း လုပ်နိုင်မှန်းလည်း သိသည်။ သူမ တုန်တုန် ရီရီနှင့် “ဟုတ်ကဲ့ပါ” ဦးစောဝဏ္ဏ မျက်နှာတွင် ကျေနပ်သည့် အရိပ်မတွေ့ရသဖြင့် ဖြည့်ပြောသည်။ “ကျွန်မ လိုချင်ပါတယ်” “ငါ့လီးကြီးကို မင်း ရဲ့ ရွှဲနေတဲ့ စောက်ဖုတ်လှလှလေးက လိုချင်နေတာမဟုတ်လား” စကားလုံးများကြောင့် သူ့ ဆရာမလေး၏ မျက်နှာ တွင် ဖြစ်လာသော လှုံ့ဆော်မှုအပေါ် ကျေနပ်စွာဖြင့် “မင်း အလိုးခံချင်နေတာမဟုတ်လား” စုအောင် နောက်ထပ် တိုးတိုး ဟုတ်ကဲ့ဟု ပြောသည်။ ပါးပေါ်သို့ မျက်ရည် များကျမလာအောင် မျက်လုံးကို မှိတ်ဖို့ကြိုးစားသော်လည်း မရတော့။ ဦးစောဝဏ္ဏ က မေးကို ဆွဲထားပြီး မျက်လုံးကို ကြည့်နေသည်။ “မင်း ငါ့ကို လိုးစေချင်နေတယ်မဟုတ်လား ကလေး။ ဟင်” စုအောင် ခေါင်းညိတ်ပြသည်။ မျက်ရည်များက ပို၍ ကျလာသည်။ “လိုတယ်ဆိုရင် ပြောလေကွာ” ဦးစောဝဏ္ဏ တင်းတင်းပြောသည်။ “ပြောစမ်း” စုအောင် စကားလုံးများကို စဉ်းစားရင်းပင် တုန်ရင်လာသည်။ သူမ မပြောပဲလည်း မနေနိုင်တော့။ အသက်ကို တုန်ရီစွာ ရှိက်သွင်းလိုက်ပြီး “ကျွန်မကို လိုးပါတော့ ဦးစောဝဏ္ဏရယ်” သူ အသာပြုံးသည်။ သို့ သော်ဒီထက်ပိုကြားချင်သေးသည်။
“ကျွန်မ ..ကျွန်မ ထဲကို ရှင့်လီးကြီး သွင်းတာ အရမ်း ကြိုက်ပါတယ်” ဦးစောဝဏ္ဏ စုအောင်၏ နားနားကပ်ရင်း “လာထား ကလေးမ။ မင်းဒီထက် ပိုပြောနိုင်ပါသေးတယ်။ ငါပြောသလိုပြောစမ်း။ ကျွန်မစောက်ဖုတ်ထဲကို ရှင့်လီးကြီးထည့် လိုးပေးပါ…လို့။ တစ်ကြောင်းထဲပဲနော် ။ လုပ်စမ်း” စုအောင် တကိုယ်လုံး ကို နားနားကပ်ပြောသော ဦးစောဝဏ္ဏ ၏ စကားလုံးတိုင်းက ရိုက်ခတ်သွာသည်။ သူ့အသံ၏ သြဇာက သူမ ကိုယ်ကို မထိပဲ ထားသော မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် ဆူပွက်စေသည်။ နားနားကပ်ပြောတော့လည်း သူမစိတ်လုံချုံမှု အတန်အသင့်ရပြီး တိုးတိုး ပြန်ပြောရဲလာသည်။ “ကျွန်မ စောက်ဖုတ်ထဲကို ရှင့်လီးကြီး ထည့်ပြီး လိုးပေးပါရှင်” ဦးစောဝဏ္ဏ သွေးတွေကြွလာပြီး ဥတွေမြုတ်သွားတော့မတတ် လီးအဆုံး ထိုး ထည့်လိုက်ချင်စိတ်ကို တားမရတော့။ “ကျေနပ် စေရမယ် အချစ်လေး။ သိလား” “အိုး.. ဟုတ်..။ အိုး… လုပ်ပါ လုပ်လုပ်” စုအောင်၏ ခြေထောက်များကို သူ့လက်ဖြင့်ဆွဲကားလိုက်ပြီး သူ့ဟာကြီးကို နောက်ထပ် တစ်လက်မ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ သူမမျက်နှာ မှ တစ်ဝက်တပျက်နာကျင်မှုကို အရသာ ခံ၍ ကြည့်သည်။ သူမ ကိုယ်လုံးက တုန်ခါလာပြီး နောက်ထပ် အသွင်းကို ငံ့လင့်လာသည်။ သူက ဆက်သွင်းသည်။ လီးကြီး တစ်လက်မချင်းဝင်နေမှုကို သူမ ကိုယ်တွင်းမှ ခံစားသိရသည်။ လီးထိပ်ဖျားသည် သူမ သားအိမ်နှင့် ထိသွားသော် လည်း သူ့ ဥများက သူမ ဖင်ကို မထိသေး။ သူ ဆက်တိုးသည်။ သူမ စောက်ဖုတ်လမ်းကြောင်း ပိုဆွဲစန့်လာအောင် မြှင်းပြီးဆွဲသည်။
သူမညည်းတွားရင်း နောက်ထပ် ဝင်စေလိုဇောဖြင့် ကိုယ်ကို ဆန့်ထုတ်သည်။ “ဘယ်လိုနေလဲ ကောင်မလေး” “ငါ့လီးကြီး မင်း စောက်ပတ် ပူပူထဲမှာ ဘယ်လိုနေလဲဟင်” “အူး… အင်း..အင်း” စုအောင် အသက်ပင်မရှူနိုင်။ စကားလုံးကို ကွဲပြားအောင် မနည်းပြောနေရသည်။ “အိုး…” “ဘယ်လို အရသာရှိလဲ ပြော” သူ့လက်က သူမလည်မျိုကို အသာဆုတ်ကိုင်သည်။ သူမအတွက်တော့ ပြုတ်တူနှင့် ညှပ်ခံရသလိုဖြစ်နေသည်။ သို့သော် သူက ပြောခိုင်း နေသည်။ “နွေးနွေးကြီး” သူမ လေသံဖြင့် “ပြီးတော့ မာမာကြီး။ ပြီးတော့…အိုး…… ကောင်းတယ် ဦးစောဝဏ္ဏရယ် လုပ်ပါ” “ဘာလုပ်ရမှာလဲ ကောင်မလေး” သူမ ဘာလိုနေမှန်းသူသိသည်။ ဒီအတွက် တောင်းပန်တာကို လိုချင်သည်။ “လုပ်ပါ .. ဦးစောဝဏ္ဏ” စုအောင် လေသံဖြင့်ပြောသည် “ကျွန်မကို လိုးပါ” ဦးစောဝဏ္ဏ ထိပ်ဖျားသာ ကျန်သည်အထိ တစ်ဆုံးဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး မြန်မြန်နှင့် ကြမ်းကြမ်း ပြန်ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ သူမ အင့်ကနဲ ဖြစ်သွား သည်။ နာကျင်မှုဖြင့် ငိုညည်းသည်။ သို့သော် ခါးက ပြန်ပင့်ပေးသည်။
ကိုယ်ခန္ဓာက ထပ်တောင်းဆိုနေသည်။ “မင်းလို ချင်တာ အဲဒါမျိုးလား ကောင်မလေး” ဦးစောဝဏ္ဏ မေးသည် “ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးပေါ့။ ဟုတ်လား အချစ်လေး” “အမလေး. ဘုရားရေ။ အင်း.. ဟုတ်ကဲ့” သူမညည်းရင်း လျှာကို အသာကိုက်ထားသည်။ နာကျင်မှုနှင့် အရသာတို့ ရောပြွန်းလျက် သူနှင့် ထိတွေ့နေမှုကို လွတ်မသွားအောင် အတင်း လိုက်ကပ်သည်။ သူ့လျှာကြီးတိုးဝင်လာသဖြင့် သူမ နှုတ်ခမ်းကို ဟပေးပြီး စုတ်ယူလိုက် သည်။ ဦးစောဝဏ္ဏ ရှူးရှူးရှဲရှဲဖြင့် သူ၏ ငယ်ငယ်က ဆရာမလေးကို နှစ်ကြိ်မ်ဆက်တိုက်ပြီးအောင် လိုးပြီးမှ ကိုယ်ထဲသို့ လရည်များ ပန်းထွက် သွားသည်။ သူမကို ကုန်းခိုင်းပြီး ခွေးလိုးလိုးရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း သူမ ကိုယ်မှ ကျေနပ်စိတ်ဖြင့် အငန်းမရတုန်ခါနေခြင်း အပေါ် သဘော တွေ့သွားကာ ဒီအတိုင်းပင် သုတ်ပိုးများ ထိုးသွင်းလိုက်ကာ စုအောင်ပေါ် ပုံလျက်သား ကျသွားသည်။ ဝဏ္ဏ သူ၏ ဆရာမလေးကို ပညာကောင်းကောင်း ပေးလိုက်နိုင်သည်။ (ပြီးပါပြီ